တစ်ပတ်လျှင်5ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည် - Keto Guru
တရားဝင် site Keto Guru
အိမ်၌တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကီလိုဂရမ်လျှင်မြန်စွာမည်ကဲ့သို့ဆုံးရှုံးနိုင်သနည်း။
တစ်ပတ်လျှင်5ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည်
တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကီလိုဂရမ်ကိုဆုံးရှုံးရန်၊ ဤအချိန်အတွက်သင့်ဘဝပုံစံကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူလိုက်ပါသင့်သည်။အိပ်မောကျနေသည့်အစာရှောင်ခြင်းသည်တစ်ပတ်အကြာတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ပြန်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်၏အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်သည်။လိုအပ်သောကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အမြန်အစားအစာပြီးဆုံးပြီးနောက်အစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်သတိရရန်လိုအပ်သည်။
ရုတ်တရက်အပိုဆုံးရှုံးမှုကိုနားလည်ရန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကိုက်ညီမည့်ယေဘူယျအားဖြင့်နာကျင်သောဖြစ်စဉ်မဟုတ်သောအစားအစာကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးအနာဂတ်အတွက်သိမ်းထားသင့်သည်အပတ်စဉ်ကာလသည်အလွန်တိုတောင်းသောကြောင့် ၅ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးမှုပြproblemနာကိုနေ့စဉ်အစားအသောက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သာလျှင်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အားကစား၊ သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာသောဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်မရှိပါ။၄ င်းတို့သည်အနာဂတ်တွင်ရရှိသောအပတ်စဉ်ရလဒ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္muscleာန်နှင့်ကြွက်သားများကိုတိုးမြှင့်စေရန်ဆက်လက်စဉ်းစားနိုင်သည်။သူတို့ရဲ့ရလဒ်တစ်လလျှင်အကြောင်းကို 3-5 ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
နံနက်ခင်းဗိုက်ဆာနေစဉ်တွင်သန့်ရှင်းသောပူနွေးသောရေ (သို့) ပန်းသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်သို့မဟုတ်ရေ 200 ml ရေနှင့်ပန်းသီး cider ရှလကာရည်တစ်ဇွန်းဖြင့်သောက်သုံးပါ။မည်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်မနက်စာကိုမစားပါနှင့် - အနည်းငယ်သောဂျုံယာဂုသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်နေ့လုံးလိုအပ်သောစွမ်းအင်ကိုပေးလိမ့်မည်။
နေ့လည်စာတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကြော်။ မထည့်ရ၊ အသားပြုတ်သင့်သောအမဲသား (အမဲသား၊ ကြက်သား၊ ဖြစ်နိုင်သည်ရင်သား) ပါ ၀ င်သင့်သည်။ည ဦး ယံ၌ - အလင်းအစားအစာ, ဥပမာ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်, steamed ငါး, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ, kefir သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ် 200 ml ။အစားအစာအသစ်တစ်ခုကိုစားရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ သို့သော်ငတ်မွတ်မှုပိုမိုပြင်းထန်လာပါကဟင်းသီးဟင်းရွက်များသီးသန့်ပါဝင်သောသရေစာတစ်စောင်ကိုသင်တတ်နိုင်သည်။
တစ်နေ့လျှင်ရေ ၂-၂. ၅ လီတာသောက်ပါ။
တစ်နေ့ ၃-၅ ကြိမ်စားပါ၊ တစ်နေ့တာတွင်အလွန်အကံျွမစားရန်သို့မဟုတ်ဆာလောင်နေရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
တစ်နေ့လျှင် 200-350 ဂရမ်အထိအစာစားပါ၊ ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၀ အတွင်းအစာမလတ်ပါနှင့်၊ အကောင်းဆုံးဆိုလျှင်ဆားကိုလျှော့ချပါ။
ဂျုံမှုန့် (ခေါက်ဆွဲ၊ ခေါက်ဆွဲ)၊ အသစ်စက်စက်ဖုတ်ထားသောပေါင်မုန့်များမှထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုရန်ငြင်းဆန်သည်။သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကဒီအပိုပေါင်တွေဆုံးရှုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆူညံသော Mayonnaise၊ ဝက်အူချောင်းများနှင့်ဆေးထည့်သည့်နေရာများမှရှောင်ပါ။ဤသည်ခြေထောက်အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မယ်။
အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောနံ့သာမျိုးနှင့်ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း၊၎င်းတို့သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်လက်မခံနိုင်သောစားသုံးမှုပမာဏတိုးပွားလာစေသည်။
စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်သေးငယ်သောပြားများမှစားရန်ကြိုးစားပါ။ဤရိုးရှင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည်အတော်လေးထိရောက်ပြီး ဦး နှောက်နှင့်အစာအိမ်ကိုလှည့်ဖြားနိုင်သည်။
အစားအစာကိုအပြည့်အဝဝါး။ ဖြည်းဖြည်းစားပါ။တီဗွီသို့မဟုတ်စာအုပ်နောက်ကွယ်မဟုတ်ဘဲမီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်ထမင်းစားခန်းတွင်ပြုလုပ်သင့်သည်။၎င်းသည်အစားအစာပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်အစာ၏အရသာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝန်ကိုလေ့ကျင့်မှု၊ ဦး စားပေးမှုများနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာတစ် ဦး ချင်းရွေးချယ်သည်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နံနက်ခင်းနွေးထွေးမှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အားကစားရုံမှာအားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရေကူးကန်ဆီကိုအလည်အပတ်ခရီးဖြစ်နိုင်တယ်။
အလင်းရောင်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်အိပ်ရာမှနိုးပြီးနောက်မိနစ် ၆၀ တွင်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပြီးဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။
အစွမ်းခွန်အားလေ့ကျင့်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများသည်သူတို့၏ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ပြီးအထူးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာစေရန်သေချာလေ့ကျင့်သင်ကြားသူများနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
မိနစ် ၂၀ ကြာရေနွေးအိုးလေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ် ၂၀ မိနစ်ခန့်ပြေးခြင်းသည်သင့်အားကယ်လိုရီဖယ်ရှားရန်နှင့်တစ်နေ့လုံးသင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျရင် ၆-၈ နာရီလောက်အနားယူရမယ်။အချိန်ကြာမြင့်စွာအိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်ခြင်းမရှိခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။အတွင်းပိုင်းစနစ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအားလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ညအချိန်တွင်ခန္ဓာကိုယ်သည်စွမ်းအင်အမြောက်အများကို အသုံးပြု၍ ကယ်လိုရီကိုအသုံးပြုသည်။သင့်လျော်သောအိပ်စက်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကုထုံးအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်ရိုးရှင်းသောဆန့်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားထုခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုစတင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ချွေးထွက်လာစေမည့်ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ။သင်၏လေ့ကျင့်ခန်း၏နောက်ဆုံး ၁၀ မိနစ် (သင်လေ့ကျင့်ခန်း၏အစောပိုင်းကာလများ) တွင်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သင့်သည်။
လိုချင်သောရလဒ်များရရှိရန် (အနုတ် ၅ ကီလိုဂရမ်) ရှိလျှင်အားလုံးသောနည်းလမ်းများသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အရာအားလုံးကိုပညာရှိစွာနှင့်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်စွာချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။အပိုဆောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်၊ အစားအစာနှင့်လေးနက်သောကာယလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်သင်ပန်းတိုင်ကိုလျင်မြန်စွာအောင်မြင်နိုင်သည်။
၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွင်လုပ်သင့်သည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏ထိရောက်မှုကိုများစွာမြှင့်တင်လိမ့်မည်။ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္atာန်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သောအမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုများရှိသည့်လိမ်းဆေးထုတ်ကုန်များဖြစ်သော“ ထုပ်ခြင်း” ကိုသုံးနိုင်သည်။ အထူးပစ္စည်းများမှလေ့ကျင့်ရန်အထူးအဝတ်အစားများဝတ်နိုင်သည်။ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေသည်၊ အပူကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး lipolysis ဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်စေသည်။အနှိပ်ခံခန်း၊ ချွေးပေါင်းအိမ်နှင့်ရေကူးကန်သို့လည်ပတ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိမ်၌တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် ၅ ကီလိုဂရမ်အထိမည်သို့လျော့နည်းရမည်ကိုအဓိကရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။
မိုနိုအစားအစာ။အဓိကအချက်မှာအဓိကအားဖြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခု (ဆန်၊ ကဖေး၊ ပန်းသီး၊ ဂျုံ၊ ချိ့စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
အစားအစာစားသုံးမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်း (ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းအစားအစာ) ။
ဖြစ်နိုင်သမျှအရှည်ဆုံးသောအစားအစာ (ပရိုတင်း) များကြောင့်ဖြစ်သည်။အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်သင့်တော်သည်။
ဤဓာတ်စာများသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ သွေးအားနည်းရောဂါနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများရှိသူများအတွက်မထောက်ခံပါ။ကိုယ်ခန္ဓာအားနည်းနေချိန်တွင်နွေ ဦး ရာသီ၌သင်မစားသင့်ပါ။
mono အစားအစာအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများပါဝင်သောညွှန်ကိန်းမီနူး -
ဗိုက်ဆာနေသောဗိုက်တွင်သံပုရာအရံအရံများနှင့်ပျားရည်တစ်ဇွန်းပါသောရေပူ 200 ml ။
နံနက်စာ - ဂျုံယာဂု၏ 1/3၊ လက်ဖက် (သကြားမပါ) သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည် (beetroot, tomato, pumpkin) ။ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ - beet ဖျော်ရည်သည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုကျဆင်းစေပြီး ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောစေနိုင်သည်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါများအတွက်မထောက်ခံပါ။
နေ့လည်စာ - ယခင်ချက်ပြုတ်ထားသောဂျုံယာဂု၏ 1/3 ။
ညစာ - ကျန်ရှိသောကောက်ပဲသီးနှံ။
ရွှေဖရုံသီးသည်ပျင်းရိသူကိုပင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်။ရွှေဖရုံသီးကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ရောစပ်။ ဖြစ်စေသီးခြားစားသုံးရန် (ဂျုံယာဂုသို့မဟုတ်ဖုတ်ထားသောပုံစံဖြင့်) သီးခြားစားရန်အကြံပြုသည်။ဒါဟာအတော်လေးရိုးရှင်းစွာပြင်ဆင်သည်။ဖရုံသီးကိုသေးငယ်သော Cube များထဲသို့ခုတ်ယူပြီးရေထည့်ကာမိနစ် ၃၀ ခန့်ချက်ပြုတ်သည်အထိမျှတည်ထားပါ။ထို့နောက်ဆန်သို့မဟုတ် oatmeal ဇွန်းတစ်ဇွန်းကိုထည့်ကာနောက်ထပ်နာရီဝက်ခန့်ဆက်ပြီးမျှတည်ထားပါ။သငျသညျအချောဂျုံယာဂုမှပျားရည်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကဆားမကြိုးစား။
Immortelle, dandelion, bullochka တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ကာလဝမ်းရောဂါဆိုင်ရာဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အားအဆီများလျင်မြန်စွာပြိုကွဲစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။အဆီကိုလောင်ကျွမ်းပြီးပြproblemနာရှိသောနေရာများတွင်စုဆောင်းခြင်းမပြုရ။ပန်ကရိယ၊ အသည်းရောင်ရောဂါ (သို့) အူသိမ်ရောဂါရှိသူများကဤအချိုရည်များကိုမသောက်သင့်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျနေစဉ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိရောက်စွာသန့်စင်စေရန်အတွက်ဂေါ်ဖီထုပ်မှအသီးဖျော်ရည်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်အသုံးဝင်သည်။၎င်းသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကိုတိုးတက်စေပြီးကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်မှအဆီများစုဆောင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ဒါဟာ - အစားအစာမတိုင်မီတစ်နာရီ, အချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်နံနက်ယံ၌တစ်နေ့လျှင်ဒီဖျော်ရည်၏ 2-3 ခွက်အထိသောက်ရန်အကြံပြုသည်။ဒါဟာမုန်လာဥနီသို့မဟုတ် beet ဖျော်ရည်နှင့်အတူသောက်သုံးဖို့အသုံးဝင်သည်။
Kefir အစားအသောက်သည်အိမ်၌ ၅ ကီလိုဂရမ်လျှင်မြန်စွာဆုံးရှုံးခြင်းကိုအလွန်ထိရောက်သောတကယ့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။၎င်းသည်အတော်လေးကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူများကိုပြသည်။ ၎င်းသည်ဝမ်းဗိုက်နှင့်အခြားပြproblemနာရှိသောနေရာများတွင်အပိုပေါင်နှင့်စင်တီမီတာများကိုဖယ်ရှားရုံသာမကအဆိပ်အတောက်များကိုကောင်းစွာသန့်စင်ပေးသည်။
ဒီအစားအစာ၏အားသာချက်မှာတိုတောင်း။ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ အထူးအစားအစာများ ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။အစားအစာ၏အနှစ်သာရမှာနေ့စဉ် ၁. ၅ လီတာလီတာသောက်ရန်လိုအပ်သည်။ပန်းသီး၊ လိမ္မော်၊ buckwheat, ကြက်သားရင်သားကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုသင်စားနိုင်သည်။သုံးရက်သာအကြံပြုထားသောအစားအစာကိုသင်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ဤအချိန်အတောအတွင်းနေ့စဉ် 1.5လီတာရေကိုသောက်ပါ။
Buckwheat diet သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျင်မြန်စွာလျော့ချရန်နောက်ထပ်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်တစ်ပတ်အတွင်းအထူးပြင်ဆင်ထားသည့်ဂျုံစေ့ကိုစားရန်လိုအပ်သည်။
နောက်တစ်နေ့တွင်ရာသီအလိုက်နှင့်ဟင်းချိုမပါဘဲစားပါ။ kefir သို့မဟုတ်လက်ဖက်စိမ်းဖြင့်ဆေးကြောပါ။
Kefir ကိုတစ်နေ့လျှင် ၁ လီတာထက်မပိုသောက်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။အစားအစာ၏ကြာချိန်သည်တစ်ပတ်ဖြစ်သည်။သကြားမပါဘဲသစ်သီးနှင့်လက်ဖက်ခြောက်ကိုစားသုံးရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းအကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအာဟာရများကိုမဆုံးရှုံးစေရန်ဆရာဝန်များကအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျနေစဉ်ဗီတာမင်ဆေးများကိုသောက်သုံးရန်အကြံပေးသည်။
ပညာရှင်များသည်နားမလည်။ နားမလည်သောအစားအစာဆေးများကိုဆေးဆိုင်၊ အင်တာနက်နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်အကြံပေးသူများ၏အကြံဥာဏ်များကိုဝယ်ယူရန်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှမတိုက်တွန်းပါ။ဤဆေးများသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောနို့တိုက်သတ္တဝါများကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းဆေးများကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်သည်၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေနိုင်သည်။
သို့သော်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ပို၍ အန္တရာယ်များသည့်နည်းလမ်းများလည်းရှိသည်။အရင်းအမြစ်အတော်များများသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ဆိုဒါဆိုဖာများကိုအကြံပြုကြသည်။အမှန်မှာဆိုဒါသည်အစာအိမ်၏အချဉ်ဓာတ်ကိုပျက်စေသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။မုန့်ဖုတ်ရာတွင်ဆိုဒါကိုရေချိုးသကဲ့သို့အသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းကိုမည်သည့်ပမာဏနှင့်မျှမပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မကူညီနိုင်ပါ။
အစားအစာပါးလွှာခြင်း - မီနူး၊ အစားအစာ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အာဟာရ - မီနူး၊ အစားအစာ၊ သင်မှန်မှန်စားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ကျန်းမာတဲ့အစားအစာရဲ့အခြေခံမူတွေ၊ တစ်နေ့မှာဘယ်လောက်စားနိုင်လဲ၊ အကြံပြုထားတဲ့အစားအစာတွေ၊စွန့်ပစ်သင့်သောအစားအစာများ၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းသွားချိန်တွင်အစာစားချင်စိတ်ကိုမည်သို့လျော့ချမည်နည်း။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများ။
14 မတ်လ 2021
ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာများ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာများ၊မှို၊ ပန်းသီးနှင့်သစ်တော်သီး၊ ဆန်ညို၊ မြေပဲ၊ ထင်းရှူးအခွံမာ၊
12 ဇန်နဝါရီလ 2021
ထိရောက်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းစည်းမျဉ်းများ - ၁၄ ရက်ဂျပန်အစားအစာ
၁၄ ရက်ကြာဂျပန်စာကိုစားခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အစားအသောက်နိယာမများ၊ အပြစ်များနှင့်အားနည်းခြင်းများ၊ တားမြစ်ထားသောအစားအစာများ၊ ခွင့်ပြုထားသောအစားအစာများ၊ ဂျပန်အစားအစာမှနုတ်ထွက်ခြင်း၊